ကငျဆာရောဂါသညျကလေးငယျတှအေတှကျ သူ့ရဲ့အခြိနျကို လှူမယျ့ ကီနူးရိဗျ - Thutazone
ကငျဆာရောဂါသညျကလေးငယျတှအေတှကျ သူ့ရဲ့အခြိနျကို လှူမယျ့ ကီနူးရိဗျ
ကမ်ဘာကြျောမငျးသားတလကျဖွဈတဲ့ ကီနူးရိဗျ ကိုတော့ The Matrix , Speed ,John Wick စတဲ့ ရုပျရှငျတှနေဲ့အတူ တျောတျောမြားမြား ရငျးနှီးပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အရမျးအောငျမွငျခဲ့သလို ခမျြးသာတဲ့သူတဈဦးဖွဈပမေယျ့ အလှူအတနျးရကျရောလှနျးပွီး သာမနျလူတယောကျလို ရိုးရိုးရှငျးရှငျး ဘဝကို နလေရှေိ့တာကွောငျ့လညျး သူ့ပရိသတျတှသောမက တခွားနာမညျကြျောတှကေပါ လေးစားအားကရြတဲ့သူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။
ငှေ နဲ့ ပတျသကျလို့ သူပွောလရှေိ့တဲ့စကားက ” ငှဆေိုတာ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ နောကျဆုံးမှ စဉျးစားလရှေိ့တဲ့အရာပါ” တဲ့။ ကိုယျတိုငျကလညျး ကငျဆာဖောငျဒေးရှငျးတခု တညျထောငျထားတဲ့သူဟာ နာမညျကြျောတယောကျဖွဈပမေယျ့ နာမညျကြျောကွားမှုကို နှဈသကျပုံမရပါဘူး။ အလှူအတနျး အမွောကျအမြားလုပျခဲ့ပမေယျ့လညျး သူ့ရဲ့အလှူတှကေို ထုတျဖျောပွောကွားလေ့ မရှိပါဘူး။
ရိုးရှငျးမှုကို နှဈသကျတဲ့သူဟာ အှနျလိုငျးလောကနဲ့လညျး ခပျကငျးကငျးနလေရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကငျဆာရောဂါသညျ ကလေးငယျတှကေို ထောကျပံ့မယျ့ အခုအစီအစဉျမှာတော့ မငျးသားကွီးဟာ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ အခုအစီအစဉျကတော့ Zoom Date လို့ချေါပွီး Camp Rainbow Gold လို့ချေါတဲ့ ကလေးသူငယျကငျဆာ ပရဟိတအဖှဲ့က ပွုလုပျတဲ့ လလေံအစီအစဉျဖွဈပါတယျ။
ဒီအစီအစဉျမှာ မငျးသားကွီးဟာ သူ့ရဲ့အခြိနျကို လှူဒါနျးမှာဖွဈပွီး လလေံပှဲနိုငျတဲ့ မညျသူမဆို Zoom Video App ကနတေဆငျ့ မငျးသားကွီးနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တိုကျရိုကျစကားပွောခှငျ့ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျသဘောကြ နှဈသကျတဲ့ မငျးသားကွီး နဲ့ အတူ သူ့ကိုပွောခငျြတာတှေ တိုကျရိုကျပွောနိုငျမယျ့ အပွငျ တဖကျက လညျး ကငျဆာပရဟိတအဖှဲ့ကို လှူဒါနျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
လလေံပှဲ အဖှငျ့ကွေးကို ဒျေါလာ ၁၀၀၀၀ သတျမှတျထားပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အမြားဆုံးအနနေဲ့ ဒျေါလာ ၁၇၄၀၀ ပေးတဲ့သူအထိ ရှိနပေါပွီ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ ၂၂ ရကျနေ့ ည၁၂ နာရီကို လလေံပိတျခြိနျအဖွဈ သတျမှတျထားပွီး စကားပွောခှငျ့ကိုတော့ ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနမှေ့ာ ရရှိမှာပါ။
ဒီအှနျလိုငျးလလေံပှဲမှာ ခွိမျးခွောကျတာတှေ မလြျောမကနျတာတှေ ပွုလုပျရငျတော့ Camp Rainbow Gold အဖှဲ့နဲ့ အနုပညာရှငျ တို့ဘကျကနေ ဖကျြသိမျးခှငျ့ရှိတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ အနိုငျရရှိသူဟာ ဒီအခှငျ့အရေးကို တဆငျ့ပွနျလညျရောငျးခခြှငျ့လညျး ရှိမှာမဟုတျပဲ ကိုယျတိုငျတိုကျရိုကျပွောဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Camp Rainbow Gold ရဲ့စာမကျြနှာမှာတော့ “Bill & Ted. Speed. The Matrix. John Wick.သူ့ကို သငျသိလား။ သူ့ကိုနှဈသကျလား ။ သငျ့အိမျမှာ Zoom ကနတေဆငျ့ မငျးသားကွီးကို အမှနျတကယျ တှခှေ့ငျ့ရမယျ့ တကယျ့ အခှငျ့အရေးကွီးတခုဖွဈပါတယျ။ သငျသူကိုပွောခငျြ မေးခငျြနတေဲ့ စကားတှကေို အသငျ့ပွငျထားပါ။ သရုပျဆောငျ ၊ ဒါရိုကျတာ ၊ ထုတျလုပျသူ ၊ ဂီတပညာရှငျ Keanu Reeves နဲ့ အခြိနျ ၁၅ မိနဈလောကျ ဖွုနျးလိုကျပါ” လို့ ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။
ဟောလိဝုဒျရဲ့ စိတျထားအကောငျးဆုံးမငျးသားအဖွဈ တငျစားချေါဝျေါခံရတဲ့ မငျးသားကွီးဟာ ယခုအခါမှာ အသကျ ၅၅နှဈ ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှကျ The SpongeBob Movie: Sponge on the Run အနျနီမေးရှငျး ရုပျရှငျမှာ အသံနဲ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသလို Bill & Ted Face the Music ဇာတျကားမှာလညျး ပါဝငျထားပါတယျ။ ဒါအပွငျ ၂၀၂၂ ခုနှဈမှာလညျး သူ့ပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောနတေဲ့ The Matrix4ဇာတျကားထှကျလာဦးမယျလို့ သိရပါတယျ။
———– —– ——–
ကင်ဆာရောဂါသည်ကလေးငယ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့အချိန်ကို လှူမယ့် ကီနူးရိဗ်
ကမ္ဘာကျော်မင်းသားတလက်ဖြစ်တဲ့ ကီနူးရိဗ် ကိုတော့ The Matrix , Speed ,John Wick စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူ တော်တော်များများ ရင်းနှီးပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့သလို ချမ်းသာတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အလှူအတန်းရက်ရောလွန်းပြီး သာမန်လူတယောက်လို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဘဝကို နေလေ့ရှိတာကြောင့်လည်း သူ့ပရိသတ်တွေသာမက တခြားနာမည်ကျော်တွေကပါ လေးစားအားကျရတဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ငွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူပြောလေ့ရှိတဲ့စကားက ” ငွေဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နောက်ဆုံးမှ စဉ်းစားလေ့ရှိတဲ့အရာပါ” တဲ့။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းတခု တည်ထောင်ထားတဲ့သူဟာ နာမည်ကျော်တယောက်ဖြစ်ပေမယ့် နာမည်ကျော်ကြားမှုကို နှစ်သက်ပုံမရပါဘူး။ အလှူအတန်း အမြောက်အများလုပ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့အလှူတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလေ့ မရှိပါဘူး။
ရိုးရှင်းမှုကို နှစ်သက်တဲ့သူဟာ အွန်လိုင်းလောကနဲ့လည်း ခပ်ကင်းကင်းနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကင်ဆာရောဂါသည် ကလေးငယ်တွေကို ထောက်ပံ့မယ့် အခုအစီအစဉ်မှာတော့ မင်းသားကြီးဟာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုအစီအစဉ်ကတော့ Zoom Date လို့ခေါ်ပြီး Camp Rainbow Gold လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးသူငယ်ကင်ဆာ ပရဟိတအဖွဲ့က ပြုလုပ်တဲ့ လေလံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ မင်းသားကြီးဟာ သူ့ရဲ့အချိန်ကို လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပြီး လေလံပွဲနိုင်တဲ့ မည်သူမဆို Zoom Video App ကနေတဆင့် မင်းသားကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျ နှစ်သက်တဲ့ မင်းသားကြီး နဲ့ အတူ သူ့ကိုပြောချင်တာတွေ တိုက်ရိုက်ပြောနိုင်မယ့် အပြင် တဖက်က လည်း ကင်ဆာပရဟိတအဖွဲ့ကို လှူဒါန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လေလံပွဲ အဖွင့်ကြေးကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ သတ်မှတ်ထားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အများဆုံးအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၁၇၄၀၀ ပေးတဲ့သူအထိ ရှိနေပါပြီ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ ည၁၂ နာရီကို လေလံပိတ်ချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး စကားပြောခွင့်ကိုတော့ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ရရှိမှာပါ။
ဒီအွန်လိုင်းလေလံပွဲမှာ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ မလျော်မကန်တာတွေ ပြုလုပ်ရင်တော့ Camp Rainbow Gold အဖွဲ့နဲ့ အနုပညာရှင် တို့ဘက်ကနေ ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အနိုင်ရရှိသူဟာ ဒီအခွင့်အရေးကို တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခွင့်လည်း ရှိမှာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Camp Rainbow Gold ရဲ့စာမျက်နှာမှာတော့ “Bill & Ted. Speed. The Matrix. John Wick.သူ့ကို သင်သိလား။ သူ့ကိုနှစ်သက်လား ။ သင့်အိမ်မှာ Zoom ကနေတဆင့် မင်းသားကြီးကို အမှန်တကယ် တွေ့ခွင့်ရမယ့် တကယ့် အခွင့်အရေးကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သူကိုပြောချင် မေးချင်နေတဲ့ စကားတွေကို အသင့်ပြင်ထားပါ။ သရုပ်ဆောင် ၊ ဒါရိုက်တာ ၊ ထုတ်လုပ်သူ ၊ ဂီတပညာရှင် Keanu Reeves နဲ့ အချိန် ၁၅ မိနစ်လောက် ဖြုန်းလိုက်ပါ” လို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ စိတ်ထားအကောင်းဆုံးမင်းသားအဖြစ် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခံရတဲ့ မင်းသားကြီးဟာ ယခုအခါမှာ အသက် ၅၅နှစ် ရွိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် The SpongeBob Movie: Sponge on the Run အန်နီမေးရှင်း ရုပ်ရှင်မှာ အသံနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသလို Bill & Ted Face the Music ဇာတ်ကားမှာလည်း ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒါအပြင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာလည်း သူ့ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ The Matrix4ဇာတ်ကားထွက်လာဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။